:Bọchị: Jenụwarị 4, 2020
Ego ISPARK mụbara na 2020?
Fees feeskwụ ụgwọ mbata nke Obodo Metropolitan nke Istanbul gbagoro ruru pasent 40. Citizensmụ amaala mere ihe banyere njem ndị mere na mkpebi ae mere na nzukọ ọgbakọ omebe iwu nke Disemba 2019 na IMM. gara aga [More ...]
Mgbasa Ozi Ọma Piano na Üsküdar Metro Station
Ntughari amara malitere na Üsküdar - Çekmeköy. Onye egwu egwu Barutay Kartal na-egwu piano n'ọdụ Üsküdar iji nyere ụmụaka aka n'okporo ámá. Asrụ ọrụ dịka Ọkachamara Ọzụzụ Egwuregwu na Ministry of Youth and Sports [More ...]
Ndị taksị na Trabzon Laghachi Taxi
Nyocha banyere nsogbu nke Trabzon, nzukọ a bụ isi okwu nke dolmuş nke ọgbara ọhụrụ. Ömer Hakan Usta, Onye isi oche nke verslọ Ọkwọ ụgbọala na Autgbọala, kwuru na ha kwenyere na ndị Trabzon na ndị na-ere ahịa nwere obi ụtọ na mgbanwe a. [More ...]
Umu nwanyi Parkomats nke mbu bidoro oru na Eskişehir
Na mbido onwa mbido Disemba, nwaanyị izizi bidoro ịrụ ọrụ na Eskişehir Metropolitan Municipality, nke kwupụtara na ha ga-eji ndị ọrụ na-ahụ maka ndị ọrụ Parkomatị mara ọkwa ekwuputara na akụkọ mgbasa ozi ha na-elekọta mmadụ. Ọ malitere ịrụ ọrụ na Mahmut Pehlivan Street na Kızılcıklı na ụbọchị mbụ. [More ...]
Ọdụ ụgbọ atọ eruteri na ụzọ Sublıdere
Fahrettin Altay - Narlıdere igwe ihe eji egwu mmiri arụ ọrụ ruru ọdụ ọdụ nke atọ. İzmir Metropolitan Municipality Rail System Department, Bornova Evka 3 - Fahrettin Altay metro line ndọtị Narlıdere'ye [More ...]
Ihe owuwu nke Cengiz ga-ewulite okporo ụzọ ijeri T2.7 billion na Croatia
Cengiz Construction ga-ewu ụzọ ụgbọ elu Croatia dị nde 2.7 na Croatia: Onye na-ede akwụkwọ akụkọ Dünya Kerim Ülker dere nkebi ya akpọrọ "Cengiz ga-ewulite ụzọ ụgbọ elu ijeri 2.7 na Croatia!" Lee nkọwa nke edemede ahụ; golf [More ...]
Mısra Öz Sel, onye nwa ya nwoke Oğuz Arda Sel nwụrụ n'oge ụgbọ oloko na Çorlu na 8 July 2018, kwupụtara na e mepere nchọpụta abụọ megide ya maka ịkparị Onye isi ala na ụlọ ikpe. Corlu district nke Tekirdag [More ...]
49 Usoro ohuru nke IETT mepere na Istanbul
IETT emepeala ahịrị 34, nke 15 dị na mpaghara Europe na 49 n'akụkụ Anatolian, iji gboo mkpa njem ndị bi na Istanbul. IETT bu n’uche inye ndi bi n’obodo Istanbul ezi njem. Maka njem iji Marmaray [More ...]
Ozi Ọma diri Ndị Na-aga Eme! Ngwa Ederede Tachograph Digital
Ministri nke Transportgbọ njem na akụrụngwa kwupụtara na etinyela akwụkwọ maka nkọwasị dijitalụ na 30 June 2020. Ternyaahụ na Istanbul na Ankara n'ọtụtụ obodo, ọkachasị ndị na-ebugharị ụgbọ, Ozi nke Transportgbọ njem na akụrụngwa 'Digital tachograph' wetara [More ...]
Minista na-ahụ maka mmekọrịta azụmahịa na TCDD maka Mmekọrịta Mkpesa Mkpesa nke Corps
Corlu train case mgbuzu na-eso nzaghachi nke ozi ahụ na ngagharị nke ajụjụ a, ọkachamara akaebe Bekir Binboğa, Sıddık Yarman na Mustafa Karaşahin'e 14 nkwekọrịta ndị ndụmọdụ dị iche iche maka 1 nde 40 puku [More ...]
Bursa haziri Technical University of Turkey si Automobile na Bursa 'panel, a guest BCCI onyeisi oche Ibrahim Burkay, kwuru, sị ụlọ ụgbọala mmepụta ga mee ngwangwa Turkey si na-ajụ-elu na na ntughari nke elu-tech n'ichepụta, [More ...]
İzmit Salim Dervişoğlu Street ga-abụ ihe ọzọ na D-100
Obodo Kocaeli, nke emeela ihe ga-eme ka ụzọ ụgbọ ala belata ma kwalite njem nke ụmụ amaala, na-emepe Izmit Salim Dervişoğlu Street, nke gbasawanyere n'okporo ụzọ abụọ × 2 double. Dika uzo ozo diri D-2 Highway [More ...]
Obodo Izmir nke Obodo Etiti Kwesịrị adọba ụgbọala maka ịkwọ ụgbọala
Izmir Metropolitan Municipality, nke mbụ ya ụdị site na ịbanye a oru ngo na a scrap ụgbọ ala na-adọba ụgbọala hiwere na Turkey. Ogige ebe a na-adọba ụgbọala na Menemen ga-abụ nsogbu maka nsogbu a na-ahụ maka ịgafe n'ofe obodo. Obodo Izmir Metropolitan, nwere obodo niile [More ...]
Ndị ọkachamara n'ihe ọghọm nke ụgbọ oloko Çorlu kwụrụ otu nde TL Maka Ọrụ 14
Ihe ọghọm ụgbọ oloko Çorlu a họpụtara dịka ọkachamara ọkachamara Mustafa Karaşahin Sıddık Binboğa Yarman 14 ọrụ maka ndụmọdụ maka Transportgbọ njem pụtara otu nde naịra 1. Debekwa ya na Eziokwu [More ...]